Leiden, ilay Amsterdam kely any Holland | Vaovao momba ny dia
Leiden, Amsterdam kely any Hollande
Fialantsasatra any Eropa | | Fialantsasatra any Eropa, Pays-Bas
Nandritra ny sidina nankany Amsterdam dia namaky torolàlana momba ny dia kely aho Leiden zavatra toy izany Amsterdam fa kely. Ny fahitana ny sary dia niseho tamiko ho toerana mahafinaritra tsy misy farany, angamba ny tsara indrindra jereo ao Hollande. Noho izany dia tsy sarotra tamiko ny nikarakara fitsangatsanganana tany.
Leiden dia zara raha efa-polo kilometatra atsimo andrefan'ny atsimo Amsterdam, ary misy fifamatorana fiaran-dalamby tena tsara eo anelanelan'ny tanàna roa. Rehefa nivoaka ny fiaran-dalamby aho dia tsapako fa nanao dia tsara aho. Leiden dia tanàna tsara tarehy misy tulip sy lakandrano, izay azo antoka fa hanome aingam-panahy ny zanany malaza indrindra, Rembrandt.
Fa i Leiden dia tsy vitan'ny hoe malaza amin'ny mpanao hosodoko fotsiny, fa koa amin'ny fampiantranoana ny oniversite tranainy indrindra any Holland. Eny, ary teny an-dalana, tsy mila mahita be an'i Leiden ianao vao hahatsapa fa marina izay nolazain'io mpitari-dia io. Leiden dia mitovy amin'ny Amsterdam, amin'ny tetezana, ao amin'ny lakandrano, amin'ny mahazatra ...
Tiako ny nandeha namakivaky azy io ary nahita zavatra manintona maro. Ny tranon'ny guilda tamin'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX tamin'ny lafiny roa amin'ny lakandrano, ny valin'ny rivotra De Valk, iray amin'ireo tsara tarehy indrindra any Hollande, ary na dia ny Botanical Garden aza, izay marina indrindra ny antitra indrindra any Eropa. Any amin'ny firenena misy voninkazo toa an'i Holland, ahoana no tsy hitsidihana toerana toy izany, marina?
Raha manohy mandeha ianao dia ho hitanao ihany koa ny Museum of the Pilgrims of America, izay nonina tao Leiden nandritra ny iraika ambin'ny folo taona talohan'ny niverenany tany amin'ny taniny. Tranombakoka iray hafa mahaliana ao an-tanàna ny tranom-bakoka Boerhaave, liana be satria miresaka momba ny fitsaboana tamin'ny taonjato lasa teo. Tanàna kolontsaina tokoa i Leiden, satria manana tranombakoka marobe.
Na dia mieritreritra zavatra tsara kokoa noho ny hatsaran'ny mandeha mamakivaky tanàna feno lakandrano sy trano mahafinaritra aza aho. Ho hitanao ny Lapan'ny tanàna Leiden, izay manana mahaliana ny endrika Renaissance lehibe indrindra any Holandy, ny tranon'ny fandanjana sy ny refy na ny tranon'ny Pesta, ireo trano roa naorina tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo.
Toy ny any amin'ny tanàn-dehibe rehetra, aza hadino ny mitaingina sambo avy amin'ny rano hankafy ny fomba fijerin'i Leiden iray hafa.
Rehefa niverina tany an-trano aho dia niverina niaraka tamin'ny fahatsapako fa nanararaotra ny dia nataoko fisaorana an'i Leiden. Koa satria ianao mamaky an'i Amsterdam, manaova toerana ho an'ity zorony mahafinaritra ity.
Sary Via Travelpod
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Pays-Bas » Leiden, Amsterdam kely any Hollande
Ireo morontsiraka enina tsara indrindra any India
Chisinau, fizahantany ao an-drenivohitr'i Moldova